GPS စနစ်ဂျီအက်စ်အမ် GPRS အရေးပေါ်သော့ခတ် tracker တွင်အီလက်ထရောနစ်သော့ခလောက်စနစ်ကစက်ရုံနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Roadragon
GPS စနစ်ဂျီအက်စ်အမ် GPRS အရေးပေါ်သော့ခတ် tracker တွင်အီလက်ထရောနစ်သော့ခလောက်သည့်စနစ်
GLL130 ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသော့: (BT + GPRS + ဂျီပီအက်စ်)
1. GLL130 ကုန်ပစ္စည်း Specific
ဝန်ဆောင်မှု လိမ္မော်ရောင်, OEM ကိုထောကျပံ့
ကုန်ပစ္စည်းပစ္စည်း လူမီနီယမ်အလွိုင်း + ကို PC
မျက်နှာပြင်ကုသမှု အပေါ်ယံပိုင်း Electroplating ရေစိုခံ, Anti-ငြိမ်မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်
ဆက်သွယ်ရေး mode ကို GPRS, ဘလူးတုသ်
ဂျီအက်စ်အမ် parameter သည် ဆက်သွယ်ရေးအကြိမ်ရေ: GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900MHz
ကူးစက်ပါဝါ: Class ကို4(2W) GSM850, EGSM900
အတန်းအစား 1 (1W) DCS1800, PCS1900
GPRS ဂီယာမြန်နှုန်း: အနိမ့် MAX85.6 kbps, မြင့်သော MAX42.8 kbps
ပံ့ပိုးမှု SMS ကို command ကို setting
SIM ကဒ် : ထောက်ခံမှု 1.8 / 3.0V microSIM ကဒ် SMD chip ကို, SIM ကဒ်
ဂျီပီအက်စ် parameter သည် 66 လိုင်းများ: type ကိုလက်ခံရရှိ အကြိမ်ရေလက်ခံခြင်း: 1575.42MHz
စတား sensitivity ကို: -165dBm
positioning တိကျမှန်ကန်မှု: <10 မီတာ
အေးက start အချိန်: <35 စက္ကန့် (ပျှမ်းမျှ)
နွေးက start အချိန်: <33 စက္ကန့် (ပျှမ်းမျှ)
ပူက start အချိန်: <1 စက္ကန့် (ပျှမ်းမျှ)
ဘလူးတုသ် parameter သည် ဘလူးတုသ် chip ကို: TI-CC2541 Operating အကြိမ်ရေ: 2.4G
receiver sensitivity ကို: -90dbm
လုံခြုံရေး encryption ကို: AES encryption ကို
ဘလူးတုသ်စံ:4BLE
ပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းကိရိယာများ အထက် iOS, Android 4.3, Window XP နဲ့
firmware update ကို ပံ့ပိုးမှု OTA အဆင့်မြှင့်
တရားမဝင်မိုဘိုင်းထောက်လှမ်း G-sensor အတွင်းပိုင်း
အသံနှိုးဆော်သံ ဉသြသံ built-in
power supply mode ကို 3.7V / 6600mAH အားပြန်သွင်းနိုင်လီသီယမ်ဘက်ထရီ
mode ကိုအားသွင်း ပြင်ပ2core ကိုရေစိုခံအားသွင်း interface ကိုပြုလုပ်5~ 8V / 2A, DC input ကိုနှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်
standby လက်ရှိ လက်ရှိလည်ပတ်: 60mA, standby လုပ်ထားလက်ရှိ GPRS: 3mA, ဘလူးတုသ် standby လက်ရှိ: 10uA
mode ကိုသော့ဖွင့် mobile phone, APP, ဘလူးတုသ် mode ကို + GPRS mode ကို
အချိန်သော့ဖွင့် ကားသော့ဖွင်ညွှန်ကြားချက်များလက်ခံရရှိမှု၏3စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲ
Lock ကိုအချိန် စစ်ဆင်ရေး၏ mode ကိုပေါ် မူတည်. တုံ့ပြန်မှုအချိန် (3 ~ 60 စက္ကန့်)
အလုပ်လုပ်အပူချိန် -10 ~ 80 deg C ကို
operating စိုထိုင်းဆ (လိမ်းဆေးမပါဘဲ) ~ 95% 5%
ဝိသေသ function ကို 1.GPS + မိုဘိုင်းအခြေစိုက်စခန်းဘူတာရုံမျိုးစုံတိကျတဲ့ positioning ကိုပေါင်; 2. ဘလူးတုသ်အနိမ့်ပါဝါကို standby;
3. လမ်းကြောင်းအသံဖမ်း, အီလက်ထရောနစ်ခြံစည်းရိုး (ယန် Shen); 4. ဝေးလံသောအခွင့်အာဏာအလိုအလျှောက်သော့ဖွင့်, ထောက်ခံမှုအရေးပေါ်သော့ဖွင့ (ယန် Shen);
5 ထောက်ခံမှု SMS ကိုဝေးလံသောသက်ဆိုင်ရာ parameters များကိုပြုပြင်မွမ်းမံ;
အရောင် Black ကငွေမီးခိုးရောင်
ကုန်ပစ္စည်းစနစ်က embedded system ကို
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား 76 * 176 * 33mm
Two-ရှုထောင်ကုဒ်အရွယ်အစား 20 * 20mm
လျှောက်လွှာဧရိယာ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး, ပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အကောက်ခွန်ကြီးကြပ်မှု
1.The default အနေနဲ့ပြန်လာအချိန်5မိနစ်ဖြစ်ပါသည်, ပလက်ဖောင်းပြုပြင်မွမ်းမံရန်ညွှန်ကြားချက်များကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ GPRS နှင့်ပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ပလက်ဖောင်းမှတဆင့် standby mode မှာ 2.Locks ။
ပါဝါကိုကယ်ဖို့အသင့်အနေအထား mode မှာ 3. Lock ကို, ပွင့်လင်း GPS စနစ် positioning ကိုမရကြလိမ့်မည်ကိုပြီးခဲ့သည့်ဂျီပီအက်စ် positioning ကိုသို့မဟုတ်ပေါင် positioning ကိုဒေတာကို အသုံးပြု. data တွေကိုပြန်သွားပါ။
4. Lock ကိုစစ်ဆင်ရေးတခု GPS စနစ် positioning ကိုဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
ယေဘုယျအားတုန်ခါမှုဉသြသံသတိပေးသံပါလိမ့်မယ် 5.Locks, သော့ခတ်တုန်ခါမှု detect ပါလိမ့်မယ်, အကြမ်းဖက်တုန်ခါမှု, မိုဘိုင်းနှိုးဆော်သံဖြစ်ပေါ်မည်ခြေရာခံခြင်းပလက်ဖောင်းမှနှိုးဆော်သံ data ပို့ပါလိမ့်မယ်။
6.Through ဘလူးတုသ်သို့မဟုတ်ပလက်ဖောင်းဝေးလံသောသော့ဖွင့်, သော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်သော့ခတ်စစ်ဆင်ရေးသော့ဖွင့်နှိုးဆော်သံနှင့်သော့ခတ်နှိုးဆော်သံ data ပို့ဖို့ပလက်ဖောင်းမှအသီးသီး, နှိုးဆော်သံ data တွေကိုဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
1. GLL130 ဒီဇိုင်းကိုဆန့်ကျင်ချိုးနှင့်ရေစိုခံ, အားလုံးအမြောက်အများသာသနာကို GLL130 devices တွေကိုစက်ရုံကတည်းက Logistic SIM ကဒ်ကိုထည့်သွင်းသကဲ့သို့, သော့ခတ်ခန္ဓာကိုယ်ပွင့်လင်းမဖြစ်နိုင်ပါ။
2. အဆိုပါ GLL-130 နမူနာသော့ခတ်သည့် SIM ကဒ်ကိုထည့်သွင်းအတွင်း၌ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါ GLL-130 ကိုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်ပူးတွဲ
အတွင်းသော့ခတ်ပွင့်လင်းမတိုင်မီ3တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ electrostatic ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုရှောင်ရှားဖို့လက်ကိုဆေးကြောကျေးဇူးပြုပြီး
အဆိုပါသော့ခတ်နမူနာ SIM ကဒ်တပ်ဆင်ရန်ဖောက်သည်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်မဟုတ်4င်း၏ Connect ဝါယာကြိုးတိုတိုဖြစ်ပြီး, အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သော့ခတ်ဖွင့်ပါ။
3.2 SIM ကဒ်ကိုတက် Pick
ဂျီအက်စ်အမ် 850/900/1800/1900, ဖုံးလွှမ်း 2G ကွန်ယက်: 1. (နေပါစေ 2G, 3G, 4G) ကိုအင်တာနက် 2G ကိုထောကျပံ့လိုအပ်ပါတယ်။
SMS ကို function ကို, Caller သတ်မှတ်ခြင်း၏ function ကို 2.with, Calling
ယခင်: GPS GSM နှိုးဆော်သံ GPS တည်နေရာကွန်တိန်နာသော့ခတ်သော့ခလောက်လုံခြုံရေး tracker
နောက်တစ်ခု: ဝေးလံခေါင်သီအညွှန်းကွန်တိန်နာ RFID သော့ခတ်သော့ခလောက် GPS
console သင်္ဘောန်ဆောင်မှုများ India Pvt Ltd မှခြေရာကောက်
Glc သမုဒ္ဒရာ Lines လီမိတက်တင်ပို့ခြင်းခြေရာကောက်
မော်တော်ကားအရောင်းသည် GPS ခြေရာကောက်ဖုန်းများအတွက်
Hanjin Shipping Cargo ခြေရာကောက်
Hanjin Shipping ခြေရာကောက်
E-mail ကို: GPS1@roadragon.com